Topimaso amin’ny fahitàna vehivavy amerindiàna any anaty sarimihetsika meksikàna · Global Voices teny Malagasy
Topimaso amin'ny fahitàna vehivavy amerindiàna any anaty sarimihetsika meksikàna
Tsy i Yalitza Aparicio ("Roma", 2018) irery no namiratra
Voadika ny 12 Jolay 2019 11:55 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, English, عربي, русский, Ελληνικά, Esperanto , Español
At’ Anii’ (Ny Sakaizanao). Vokatra sarimihetsika lalaovina manontolo amin'ny fiteny teratany teneek. Saripika nozaraina tao amin'ny kaonty Instagram natao ho an'ilay sarimihetsika.
Maka tsikelikely ny anjara toerana fototra sahaza azy ao anatin'ny sarimihetsika ao amin'ny fireneny ary efa miampita sisintany ilay vehivavy meksikàna – na ny marimarina kokoa, ilay vehivavy manana fiaviana amerindiàna. Ohatra telo miavaka no horaisintsika.
Fa mialoha izany, inona no azontsika ambara momba ireo meksikàna sy ny famirapiràtany eo amin'ny sehatry ny sarimihetsika erantany tato anatin'ny taona maromaro farany? Betsaka! Indrindra fa — eo amin'ny sehatra tena tsy iresahana afa-tsy varotra — nahatonga azy ireo ho mendrika ny hitombo laza tato anatin'ny taompolo farany ireo vokatra meksikàna . Afaka tanisaina ireo mpanoratra sy mpanatontosa Alfonso Cuarón [fr] [es] (Gravity, 2013; Roma, 2018), Alejandro González Iñárritu [fr] [es] (Birdman, 2014; The Revenant, 2015) ary Guillermo del Toro [fr] [es] (La forme de l'eau, 2017), izay notoloran'ny Hollywood loka ny asan'izy ireo, toy ny tany Eoropa sy tany amin'izay rehetra nanehoana azy ireny. Mendrika ny homarihana manokana ilay talen'ny sary, Emmanuel Lubezki [fr], izay voatonona sy notolorana loka noho ireo asany, azo lazaina ho izy rehetra, nentiny nandray anjara nanomboka tamin'ny 2005.
Kihondàlana lehibe ho an'ny sarimihetsika meksikàna
Ao anatin'izay fahombiazana rehetra azon-dry zareo Meksikàna ao anatin'ny tontolon'ny “zavakanto fahafito” izay ihany, azontsika resahana ny fandraisana anjaran'ireo vehivavy… hatramin'ny anio. Carmen Martínez no nitàna ny toeran'ny mpilalao fototra tao anatin'ilay sarimihetsika At’ Anni’ (2019), sarimihetsika voalohany nolalaovina manontolo tamin'ny fiteny teenek, fiteny teratany ( fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe huaxtèque [fr], ampiasaina any amin'ireo faritra sasantsasany mitoka-monina ao San Luis Potosí, Veracruz ary Tamaulipas, any atsinanan'i Meksika).
i Carmen Martínez no nofidiana hitazona ilay toerana na dia tena hafa mihitsy aza no asa fivelomany : mpisolovava izy. Ny tranonkala Wipy dia mamaritra azy toy izao :
Iza moa i Carmen ? Vehivavy iray mpisolovava, renimpianakaviana avy ao anatin'ny vondrom-piarahamonina Huehuetlán, ao Huasteca de Potosi [fr]. Ny fiteny tének no tenin-dreniny ary rehefa niha-lehibe dia nianatra ny fiteny espaniôla izy . 22 taona i Carmen fony izy nisoratra tamin'ny sivana. Nilaza ny mpanatontosa ilay sarimihetsika, Antonino [Isordia], nandritra ny antsafa iray nataony ho an'ny gazetiboky Vogue, hoe tena mambabo manaitra filàna ny kolontsaina tének, ary teo am-pahitàna ny fahatongavan'i Carmen teo ambony sehatra mba hiatrika sivana, nihevitra ry zareo fa tena mendrika natao hitàna ilay toerana izy.
Na mbola tsy mivoaka eny amin'ireo trano fandefasana sarimihetsika andoavambola aza ny At’ Anni’ (Ilay Sakaiza na Ilay Sakaizanao) , dia efa naseho nandritra ireo fetibe (toy ny Fetibe Iraisampirenena ho an'ny Sarimihetsika tao Guadalajara [fr]) ary efa mahasarika sahady ny sain'ireo mpitia sarimihetsika erantany. Vokatr'izay indrindra, ny Jona 2019 ny fanontàna ho an'ny faritra avy amin'ilay gazetiboky Vogue dia namoaka antsafa iray sy saripika vitsivitsy ahitàna an'i Carmen Martínez.
Fahatsiarovana ny fandefasanay ny sarimihetsika tao San Antonio. Tena ankasitrahanay tanteraka ny Fiadidiana ny Tanàna izay Ing. Edyuenary Gregorio Castillo Hernandez no nisolo tena azy, ary ireo rehetra mpiaramiasa aminy nanohana anay mba hahafeno ny fahombiazan'ny fandefasana ny AtAnii , tsy hoe ela indray ao San Antonio !
Mihoatra noho ny lalao
Arcángel (ilay arkanjely – 2018) dia sarimihetsika fohy notontosaina vehivavy iray, Ángeles Cruz, avy any Mixteca [fr], any amin'ny faritra atsimon'i Meksikô. Toy izao no anoloran'ny tranonkala Sopitas an'i Ángeles (izay sady mpilalao ihany koa) :
Niasa an-taona maro tao anatin'ny indostrian'ny teatira, ny fahitalavitra ary ny sarimihetsika tao Meksika i Ángeles Cruz. Tamin'ny 1994, nahazo ny lisansa amin'ny filalaovana an-tsehatra, nomen'ny Sekolin-javakanto ao amin'ny Ivontoerana Nasionaly fianarana ny “Beaux-Arts” izy. Tamin'ny 2014, notondroin'ny Akademia ao Soeda ho ny mpilalao mendrika indrindra, ary tamin'ny 2013, nahazo ny loka Diosa de Plata (Andriamanibavy Vaolafotsy, loka iray avy amin'ireo mpitsikera ny sarimihetsika meksikàna) ary Ariel [fr] iray noho ilay sarimihetsika voalohany vitany tamin'ny maha-mpanatontosa azy.
Raha momba ny laza mendrika azon'ilay sarimihetsika fohy an'i Ángeles Cruz, ity ny lazain'ny tranonkala Proceso momba izany:
Ny Arcángel dia efa nahazo “Corail” iray nandritra ny Fetiben'i La Havane [fr] tany Kiobà, loka natao ho an'izay tsara indrindra tamin'ireo tantara noforonina narafitra ho sarimihetsika fohy, tao amin'ny Cinequest Film & Creativity Festival tany San José any Kalifôrnià, ny lokan'ny Révélation tany Cinélatino, Fetiben'ny sarimihetsika avy any Amerika Latina natao tao Toulouse, Frantsa; nahazo ny loka Sari!mihetsika fohy mendrika indrindra tao amin'ny Fetibe iraisampirenena ho an'ny sarimihetsika tao Ismailia – Ejipta, ary ny mendrika indrindra tamin'ireo tantara noforonina narafitra ho sarimhetsika fohy niaraka tamin'i Patrocinia Aparicio, vehivavy mpilalao mendrika indrindra sy Noé Hernández, lehilahy mpilalao mendrika indrindra tao amin'ny Fetibe Iraisampirenena ho an'ny sarimihetsika tao Puerto Rico. Fanampin'izay, nandritra ny Fetibe Iraisampirenena ho an'ny sarimihetsika tao Hermosillo, Sonora dia azony ihany koa ny loka ho an'ny tsara indrindra tamin'ireo sarimihetsika fohy novokarinà meksikàna .
Ity asa ity, niangalian'i Ángeles Cruz fatratra ny fanatontosana azy, dia miresaka ny lohahevitra mikasika ny maha-marefo ireo olona tratry ny fahanterana, toy ny itateran'ny gazety ao an-toerana El Imparcial azy.
Noho i @fichermosillo , ny fitiavako manontolo sy ny fisaorako tsy manam-petra atolotro an'i @noehernandez7519 sy ny tarika iray manontolo mpiara-manatontosa izay niaraka tamin'ny talentany, ny maha-matihanina azy ary ny fandavantenany, nahafahana nahatanteraka ny zavatra rehetra. @lola_ovando @carbscorrea@yaaviko @feliphotograf @filomarino@llogurt @acelo_ruiz @alendrey@tatismaganda @_cascas@jennymendozagarcia @imcine#myriambravo @pablo_marquez79@kokoxuxp César Palafox, Chili sy ireo maro hafa. Misaotra 🙏🏾
Fahombiazana miteraka olana
Ireo mpampahalàla vaovao sasany manao resaka ankolaka hoe nifantohan'ny saina be kokoa ireo vehivavy nisolo tena ny sarimihetsika meksikàna, ary indrndra fa i Yalitza Aparicio [fr]. Moa ve tsy ny fifantohan'ny saina tany amin'i Yalitza no nahafahana nahalàla misimisy kokoa momba ireo vehivavy amerindiàna milalao sarimihetsika ? Anjaran'ireo mpitsikera sy mpandalina ny manapaka ny momba izany.
Ny zavamisy hoe, rehefa nivoaka tao amin'ny Netflix ilay sarimihetsika Roma [fr] (2018), imbetsaka efa nahazo loka, betsaka koa ny voasoratra sy fanehoankevitra momba ny zavabitan'i Yalitza Aparicio, izay avy any Oaxaca [fr] ihany koa. Nokianina ireo fanitsiana nomerika natao tamin'ny sariny (izay ambaran'ny sasany fa manome azy lokonkoditra mazavazava kokoa), sy ny tena maha-araka ny tokony ho izy ireo fisehoany tany amin'ireo hetsika mampientanentana, toy izay itiavan'ny sarimihetsika azy, “karipetra mena” ary lanonana fanolorana loka.
Mifanaraka tsara amin'ny lohahevitr'ilay sarimihetsika ireny safotofoto rehetra ireny, izay miresaka ny fanavakavahana mifototra amin'ny sarangam-piarahamonina sy ny anjara toeran'ireo mpiasa an-trano any anivon'ny fiarahamonina meksikàna, ankoatra ny zavatra hafa.
Momba ireo fanenjehana, azo vakiana ao amin'ny SDPNoticias ny hoe :
Indrisy ho an'ilay ramatoa mpilalao sarimihetsika, nitombo be ireo kiana manambany azy teny anaty tambajotra sosialy hatramin'ny nibahanan'ilay sarimihetsika novokarin'ilay meksikàna mpanatontosa ny efijery tany amin'ireo fetibe manana ny maha-izy azy manerana izao tontolo izao. Toy izany no nanjo ilay rangahy mpilalao Sergio Goyri, izay andro vitsivitsy lasa izay no azo sary niresaka an'ilay vehivavy mpilalao sarimihetsika ho “vehivavy indiana ratsy fitondrantena”, tamin'ny zavabitany tao anatin'ilay sarimehitsika. Fialonana ve ?
Mifangaroharo sy saro-takarina ireo fanehoankevitra nateraky ny fahombiazan'ireny vehivavy ireny tany anaty sarimihetsika, jerena avy any ambadiky ny sisintanintsika. Nahoana no amin'izao fotoana izao ry zareo no mahazo fankasitrahana fa tsy taloha? Nahoana no ireo nahazo laza iraisampirenena ihany no resahana fa tsy ireo miasa isanandro eny anivon'ny vondrom-piarahamonina . Sns.. Ny azo antoka aloha, dia vehivavy telo manana fiaviana amerindiàna no ohatra ananantsika eto, izay niasa mba ho tafitra ao anatin'ny tontolo iray izay betsaka no tsy tafita, ka tsy afaka ny tsy ho hita ety anatin'ny Global Voices ny tantaran-dry zareo sy ny ezaka nataony.